Qalab Caafimaad oo lagu wareejiyay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya - Awdinle Online
Qalab Caafimaad oo lagu wareejiyay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya
Hay’ada socdaalka Aduunka ee International Organization for Migration(IOM) ayaa wasaarada Caafimaadka Xukumada Faderaalka Soomaaliya ku wareejisay qalab Caafimaad oo loogu tala galay ka hortaga faafitaanka Xanuunka Coronavirus.
Qoraal kooban oo ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa lagu sheegay in qalabkaan wasaaradu kala wareegtaya hay’da Caalamiga ah IOM waxaana loo qorsheeyay isbitaalka Martiini ee Magaaladda Muqdisho.
”Hay’adda IOM oo ku wareejisay Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dawladda Federaalka Soomaliya Deeq agab caafimaad oo loogu talo galay Isbitaalka De-Martiini” ayaa lagu yiri qoraalka.
Wasaarada Caafimaadka Xukumada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii loo heli lahaa agab caafimaad oo loo adeegsado ka hortaga Xanuunka dilaaga ah ee Coronavirus.
Wasaaradda Caafimaadka ay sheegtay in ay sii soconayaan baaritaanada lagu sameynayo dadka karaantiilan ee looga shakiyay fayruska Coronavirus ee gudaha Soomaaliya.
Somaliland ayaa maanta oo isniina sheegtay in ay diiwaan galisay 3 kiis oo cusub Waxaana guud ahaan Soomaaliya ka dhigaysaa kiisaska 28-ruux, inkasta oo aysan diiwaangelin Wasaaradda Caafimaadka XFS isla markaana shaacin saddexda ruux ee Hargeysa iyo Boorama ku kala sugan.
Previous articleWasiirka Amniga Soomaaliya oo xilka ka qaaday Agaasime
Next articleGoobihii shaqooyinka oo dib u fureen dalalka caalamka qaar